Ibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu lihlanganyela ekwehlukaniseni nasekuhlanzeni izakhi zemvelo zemithi
Isisekelo sokukhiqiza sijabulela izinzuzo zezinsizakusebenza ezisendaweni yasendaweni
Isisekelo sokukhiqiza sijabulela izinzuzo zezinsizakusebenza ezisendaweni yasendaweni. sinemigqa eminingi yokukhiqiza eqhubekayo ye-ultrasonic eqhubekayo enenqubo yenqubo yonyaka yamathani ayi-6,000 wezinto zokusetshenziswa.
Ifektri yethu ine-workshop ejwayelekile ehlanzekile enemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme. Sinohlelo oluphelele lokulawula ikhwalithi olwedlulise izitifiketi zohlelo lwekhwalithi ye-ISO9001.
Imikhiqizo yethu yenziwa ngokuhambisana ngokuqinile nezinga le-GMP ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yemikhiqizo kuyo yonke inqubo. Imikhiqizo yethu ithole i-KOSHER, HALAL, SC, FDA, Non-GMO nezinye izitifiketi zeziphathimandla zomhlaba jikelele.
Hlangana Nethimba Lethu Lobuchwepheshe
Inkampani yethu igxile kakhulu ekwakhiweni kwethimba lobuchwepheshe. Sihlala njalo sibambisana nochwepheshe abaningi abavela eChina nakwamanye amazwe. Sithuthukise izinqubo ezinhle zokukhiqiza zezinhlobo zemikhiqizo ezingaphezu kweshumi, okubandakanya ukukhishwa kwesoya, i-Polygonum cuspidatum extract, i-green tea extract, i-Phellodendron extract, ne-Ginkgo biloba extract, ngokwesibonelo, umphumela wonyaka wePolygonum cuspidatum extract ufinyelela ku-100mt, kanti okukhipha minyaka yonke kokukhishwa kwesoya kufinyelela ku-50mt.
Sinikeza Okuhlukahlukene Ngempilo Ehle
Inkampani yethu izibophezele ekukhipheni izinsiza zezitshalo futhi izama ukwakha isithombe esihle senkampani. Sithemba ukuhlinzeka ngemikhiqizo yokukhipha yezitshalo emsulwa nekhwalithi ephezulu emakethe evela emhlabeni futhi sithemba nokwenza umnikelo empilweni yesintu.